ကိုးတနျးကြောငျးသူသမီးအရငျးအား အကွိမျကွိမျသားမယားပွုကငျြ့သညျ့ဖခငျကိုဖမျးဆီးထား - MM Live News
November 8, 2019 MM Live
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့၊ဘင်လှိုင်ရပ်ကွက်နေ ကိုးတန်းကျောင်းသူ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်း အား သားမယားအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်သည့် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးစိုင်းကျော်ဇောကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိခင်ဖြစ်သူမှာ တောင်ကြီးမြို့သို့ရောက်ရှိနေစဉ် အောက်တာဘာလ ၁၆ ရက် ည ၇ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ဖခင်အရင်းဖြစ်သူ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်တာ ဦးစိုင်းကျော်ဇောက နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်းခေါ်၍အင်္ကျီချွတ်ခိုင်းကာ ကုတင်ပေါ်ထိုင်စေလျက် ဖုန်းဖြင့် ညစ်ညမ်းခွေများ အတင်းပြသပြီး သားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဖခင်အားကြောက်ရသဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှမပြောပြခဲ့ကြောင်း၊ ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်အလုပ်ဖြင့် ခရီးထွက်လေ့ရှိပြီး ခရီးထွက် ရာမှပြန်လည်ရောက်ရှိတိုင်း မိခင်ဖြစ်သူ အလစ်တွင်၎င်းနေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်းမကြာခဏဝင်ရောက်၍သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ကြောင်၊ သားမယားပြုကျင့်ပြီးနောက်တားဆေးတိုက်ကြောင်းလည်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ယင်းနောက် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်အချိန်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှာနေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်း ဝင်ရောက်ပြီး သားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ်၊နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ၂ နာရီခွဲ အချိန် သားမယားအဖြစ် (၁)ကြိမ်ပြုကျင့်သည့်အပြင် သမီးဖြစ်သူ၏ ဖုန်းကို စစ်ဆေး၍ ရည်းစားထားရမလား ဟုပြောဆိုပြီး တံမျက်စည်းစတီးလက်ကိုင်ရိုး၊ သစ်သားချောင်းတို့ဖြင့်ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် …..
၄င်းတွင် ဝဲ/ယာ ပုခုံးညိုမဲ၊ ဝဲ/ ယာလက်ခုံပေါက်ပြဲ၊ ယာပေါင်ညိုမဲ၊ ဝဲ/ယာခြေသလုံးပေါက်ပြဲ၊ ယာခါးဖူးယောင်၊ ယာဂျိုစောင်းဖူး ယောင်၊နောက်စေ့ဖူးယောင်ဒဏ်ရာများလည်း ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ယင်းကြောင့်အဆိုပါကျောင်းသူမှာ သထုံခရိုင်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း….
၄င်း၏ဖခင်ဖြစ်သူဦးစိုင်းကျော်ဇောကသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ပြီး ရိုက်နှက်ခဲ့သည့်အတွက် ဥပဒေအရ အရေးယူပေးရန်တိုင်တန်းသဖြင့် ယခုအခါ သထုံမြို့မရဲစခန်း (ပ) ၂၃၀၉/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃၇၆/၃၂၅ (အမှုကြီးအမှတ်စဉ်၊၁၀/၂၀၁၉) အရ အမှုဖွင့်လှစ်ပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က သိရသည်။
ဓာတ်ပုံ – မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့
မှနျပွညျနယျ သထုံမွို့၊ဘငျလှိုငျရပျကှကျနေ ကိုးတနျးကြောငျးသူ အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျသမီးအရငျး အား သားမယားအဖွဈ အကွိမျကွိမျ ပွုကငျြ့သညျ့ ဖခငျဖွဈသူ ဦးစိုငျးကြျောဇောကို သကျဆိုငျရာက ဖမျးဆီးထားပွီ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
မိခငျဖွဈသူမှာ တောငျကွီးမွို့သို့ရောကျရှိနစေဉျ အောကျတာဘာလ ၁၆ ရကျ ည ၇ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ ဖခငျအရငျးဖွဈသူ အသကျ ၄၃ နှဈအရှယျ ဆောကျလုပျရေး ကနျထရိုကျတာ ဦးစိုငျးကြျောဇောက နအေိမျအိပျခနျးအတှငျးချေါ၍အင်ျကြီခြှတျခိုငျးကာ ကုတငျပျေါထိုငျစလေကျြ ဖုနျးဖွငျ့ ညဈညမျးခှမြေား အတငျးပွသပွီး သားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျး မှနျပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့၏ ထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။
ဖခငျအားကွောကျရသဖွငျ့ မညျသူ့ကိုမြှမပွောပွခဲ့ကွောငျး၊ ဖခငျဖွဈသူမှာ ဆောကျလုပျရေး ကနျထရိုကျအလုပျဖွငျ့ ခရီးထှကျလရှေိ့ပွီး ခရီးထှကျ ရာမှပွနျလညျရောကျရှိတိုငျး မိခငျဖွဈသူ အလဈတှငျ၎ငျးနအေိမျအိပျခနျးအတှငျးမကွာခဏဝငျရောကျ၍သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ကွောငျ၊ သားမယားပွုကငျြ့ပွီးနောကျတားဆေးတိုကျကွောငျးလညျး အဆိုပါ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ပါရှိသညျ။
ယငျးနောကျ နိုဝငျဘာလ ၆ ရကျ ည ၁၀ နာရီခနျ့အခြိနျတှငျ ဖခငျဖွဈသူမှာနအေိမျအိပျခနျးအတှငျး ဝငျရောကျပွီး သားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျ၊နိုဝငျဘာလ ၇ ရကျ ၂ နာရီခှဲ အခြိနျ သားမယားအဖွဈ (၁)ကွိမျပွုကငျြ့သညျ့အပွငျ သမီးဖွဈသူ၏ ဖုနျးကို စဈဆေး၍ ရညျးစားထားရမလား ဟုပွောဆိုပွီး တံမကျြစညျးစတီးလကျကိုငျရိုး၊ သဈသားခြောငျးတို့ဖွငျ့ရိုကျနှကျခဲ့သဖွငျ့ ….
၄ငျးတှငျ ဝဲ/ယာ ပုခုံးညိုမဲ၊ ဝဲ/ ယာလကျခုံပေါကျပွဲ၊ ယာပေါငျညိုမဲ၊ ဝဲ/ယာခွသေလုံးပေါကျပွဲ၊ ယာခါးဖူးယောငျ၊ ယာဂြိုစောငျးဖူး ယောငျ၊နောကျစဖေူ့းယောငျဒဏျရာမြားလညျး ရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ယငျးကွောငျ့အဆိုပါကြောငျးသူမှာ သထုံခရိုငျဆေးရုံကွီးတှငျ ဆေးကုသမှုခံယူနရေကွောငျး….
၄ငျး၏ဖခငျဖွဈသူဦးစိုငျးကြျောဇောကသားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ပွီး ရိုကျနှကျခဲ့သညျ့အတှကျ ဥပဒအေရ အရေးယူပေးရနျတိုငျတနျးသဖွငျ့ ယခုအခါ သထုံမွို့မရဲစခနျး (ပ) ၂၃၀၉/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ-၃၇၆/၃၂၅ (အမှုကွီးအမှတျစဉျ၊၁၀/၂၀၁၉) အရ အမှုဖှငျ့လှဈပွီး ဖမျးဆီးစဈဆေးနကွေောငျး မှနျပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့က သိရသညျ။
ဓာတျပုံ – မှနျပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့
မိခငျဖွဈသူ တောငျကွီးမွို့သို့ရောကျရှိနစေဉျ ၉တနျးကြောငျးသူသမီးအရငျးအား အိပျခနျးအတှငျးချေါသှားတဲ့ဖခငျ
အမဖွေဈသူက ထောငျကနြပွေီး အဖကေို ဘယျမှာရှာရမှနျးမသိတဲ့ မောငျနှမ (၃)ယောကျ
January 3, 2019 MM Live News
October 11, 2019 MM Live
မင်းလှမြို့နယ် Grade3သင်တန်းကမူပြ ဆရာ ဦးစွမ်းထက်မင်း (33နှစ်) မိုးကြိုး ထိမှန် သေဆုံး
May 14, 2019 MM Live News